1GB Internet inta lagu gudajiro Ramadaanka Ramadaanta oo ka socota Turkcell, Vodafone iyo Türk Telekom | RayHaber | raillynews
HomeGUUD1GB Internet inta lagu gudajiro Ramadaanka Ramadaanta oo ka socota Turkcell, Vodafone iyo Türk Telekom
21 / 05 / 2020 GUUD, TURKEY
ololeyaasha gb gb internet ee bilaashka ah inta lagu gudajiro turkcell vodafone iyo turk telekom ramazan
Turkcell, Türk Telekom iyo Vodafone waxay siiyaan 1 GB Eid al-Fitr hadiyad. Maaddadan ayaa si gaar ah loogu diyaariyey muwaadiniinteena ka raadinaysa internetka ololeyaasha internet-ka ee bilaashka ah, internet bilaash ah ayaa la siiyaa sida ay ula mid yihiin waqtiga guriga lagu isticmaalo. Intii lagu gudajiray maalmahan muhiimka ah baaxadda talaabooyinka fayraska corona, Turkcell, Türk Telekom iyo Vodafone ayaa bilaabay ololeyaal internet oo bilaash ah.
1 GB oo ah wararka internetka ee bilaashka ah ayaa si dhakhso leh u faafay. Türkcell wuxuu u yimid macaamiisha Türk Telekom iyo Vodafone. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa shir gaar ah oo fiidiyaha ah la yeeshay howl wadeenada GMS. Natiijadii ka soo baxday shirkan fiidiyowga, iyada oo laga hadlayo Pandemi, baahiyaha internetka ee muwaadiniinta ayaa la daboolay. Khudbadda, waxaa la sheegay in 1 GB internet ay tahay in hadiyad ahaan loogu siiyo dhammaan macaamiisha Türkcell, Türk Telekom iyo Vodafone. Ku dhawaaqay in 1 GB oo taageero data ah oo bilaash ah la bixin doono. Isagoo carrabka ku adkeeyay in tirada macaamiisha mobiilku ay gaarayaan 2020 milyan illaa sanadka 81, Wasiirka Gaadiidka Karaismailoğlu wuxuu yidhi, Waxaan aragnay talaabooyin cusub oo ah nooca Nooca Corona (Covid-19); Thanks to maalgelintayada kaabayaasha isgaarsiinta muddo 18 sano ah oo uu hogaaminayay Madaxweynaheena Mudane Recep Tayyip Erdoğan, dalkeenu wuxuu leeyahay mid ka mid ah kaabayaasha adduunka ugu fiican. Sidoo kale, in kasta oo wax waliba ay u wareegeen jawi dijital ah min waxbarasho ilaa nolosha shaqada iyo baahida loo qabo helitaanka kaabayaasha ayaa kor u kacay dhowr jeer, ma jirin wax carqalad ah kaabayaasheena. ”
1GB Internet-ka Bisha Ramadaan
Haddii aad tahay isticmaale adeegsadeyaal sida Türkcell, Türk Telekom iyo Vodafone, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inaad gasho diiwaanka moobiilka ee hawl wadeenadan ama websaydhka. Markaad gasho ka dib, waxaad ku qeexi kartaa 1 GB internetka khadkaaga khadka tabinta bilaashka ah. Hawlgalkan kadib, waxaad isticmaali kartaa internet-kaaga 1GB inta lagu gudajiro Ciidda Ramadaanka.
Turkcell macaamiishooda xilliga Internetka ee Istanbul Metro
Tikidhada Tikidhada Joogtada ah ee Turk Telekom Arena La bilaabay
Wicitaanka weyn ee TCDD iyo cabirrada Turk Telekom
Samsun Wareegga Turk Telekom Ku Xadgudubka Qodobka 1aad
Gaadiidka ee İzmir Tirada boqolkiiba 50 Tirada inta lagu jiro Eid Al Adha
Kadıköy-Wareegta yareynaysa Eagle ilaa 29 Daqiiqo ayaa loo Kordhin doonaa Furaha Ramadaanka
Eagle-Kadıköy metro waxay sameyn doontaa duulimaadkeedii ugu horreeyay bisha Ramadaan